Xisbiga KULMIYE Oo soo dhaweeyey Dalladda Dhallinyarada SHIFO | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Xisbiga KULMIYE Oo soo dhaweeyey Dalladda Dhallinyarada SHIFO
Hargeysa (Hubaal)- Xisbiga KULMIYE, ayaa soo dhaweeyey ururro dhallinyaro ku bahoobay dallad ka shaqaysa horumarinta oo la yidhaa SHIFO oo si rasmi ula midoobay xisbiga.
Dalladdan dhallinyarada ah ee SHIFO oo ka jirta gobollada gableedka Somaliland ee Maroodi-jeex, Awdal iyo Gabiley, ayaa xaflad ballaadhan oo lagu qabtay huteelka Crown ee magaalada Hargeysa maanta kaga dhawaaqay inay si buuxda uga mid noqdeen xisbal-xaakimka KULMIYE, waxaanna madashaasi kala qaybgalay Guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee xisbiga KULMIYE Md. Axmed Cabdi Dheere, siyaasiga Axmed Muumin Seed, siyaasiyiin kale iyo dhallinyaro fara badan.
Guddoomiyaha Dalladda Dhallinyarada ee SHIFO Mr. Khadar Xasan Aadan oo hadal ka jeediyey xafladdaasi, ayaa ka warramay ujeeddooyinka mideeyey ururrada dalladdan SHIFO oo ay ka mid yihiin la-dagaallanka qabyaaladda, is-dhexgalka bulshada, la-dagaallanka tahriibka iyo shaqo la’aanta da’yarta. Waxa kaloo uu sheegay in sababta dalladoodu ugu biiray KULMIYE ay ku dhalatay kadib markii ay ku qanceen siyaasadda xisbiga iyo mabaadi’da hoggaamiyaha u sharraxan xilka Madaxweynaha ee xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi oo ay ku tilmaameen inuu yahay masuulka ugu habboon talada waddanka.
Sidoo kale, Guddoomiyaha dalladda SHIFO ee Gobolka Awdal Mr. Cabdifataax Axmed Cismaan iyo Guddoomiyaha dalladdan ee Gabiley Mr. Cabdikariin Maxamed Cabdillaahi (Diinaari), ayaa iyaguna isku raacay in ay danta Jamhuuriyadda Somaliland u arkeen siyaasadda xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiisa Madaxweynaha Md. Muuse Biixi Cabdi.
Dhinaca kale, Aqoonyahan Maxamed Cali Bile, Dr. Cabdixakiin Siciid Bustaale, siyaasi Maxamed Aadan Dubad (Gacayte), Marwo Qadan Cabdillaahi iyo Sucaad Cumar Cismaan (Xagaa) oo dhammaantood ka tirsan xisbiga KULMIYE, ayaa hadallo ay ka jeediyeen xafladda ku bogaadiyey dhallinyaradan tallaabada ay kula midoobeen xisbiga KULMIYE.
Maayar-ku-xigeenka degmada Gabiley Md. Cabdi Yuusuf Daahir iyo Guddoomiyaha Garabka Haweenka xisbiga KULMIYE ee Gobolka Maroodi-jeex Marwo Xusni Maxamed Warsame, ayaa iyaguna ku soo dhaweeyey dhallinyaradan xisbiga KULMIYE, waxaanay kula dardaarmeen inay sii xoojiyaan isku-xidhnaanshahooda iyo ka shaqaynta taageerada KULMIYE.
Siyaasiga Axmed Muumin Seed oo ka tirsan saraakiisha xisbiga KULMIYE, ayaa sheegay in taageerada ballaadhan dadweynuhu u muujinayaan xisbiga KULMIYE beryahan dambe ay ka markhaati-kacayaan rabitaanka shacabka ee ah rajada keliya ee dalkeenu leeyahay tahay xisbiga KULMIYE.
“Waxaan uga mahadcelinayaa shacabka abaabulka iyo sida ay ugu heellan yihiin inay u garab-istaagaan xisbiga KULMYE oo ah xisbiga keliya ee maanta lagu aamini karo masiirka ummadda reer Somaliland,” ayuu yidhi Axmed Muumin Seed.
Guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee xisbiga KULMIYE Md. Axmed Cabdi Dheere, ayaa ku hambalyeeyey dhallinyarada dalladda SHIFO go’aankooda ay kula midoobeen xisbiga KULMIYE, waxaannu u faahfaahiyey taariikhda ballaadhan ee xisbigani leeyahay, waxqabadka uu dalka ka sameeyey iyo siyaasadda waqtigan u qorshaysan in murrashax Muuse Biixi ku hoggaamiyo dalka.